Barcelona oo gidaar weyn lagu horgudbay kadib guul-darradoodii PSG | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Barcelona oo gidaar weyn lagu horgudbay kadib guul-darradoodii PSG
Barcelona oo gidaar weyn lagu horgudbay kadib guul-darradoodii PSG
Posted by: radio himilo February 15, 2017
Muqdisho – Barcelona waa inay sameysaa taariikh cusub oo Champion League-ga ah si ay u tiigsadaan afar-dhamaadka tartanka kagadaal guushii qaraareyd ee ay 4-0 kasoo qaateen kooxda Paris Saint Germain.
Angel Di Maria ayaa ku furtay bandhig qurux badan iyo hubsashada gacan ku heynta kubadda isaga oo laba gool ku dharbaaxay shabaqa Barca – halka Julian Draxler iyo Edinson Cavani ay raacsadeen labada kale.
Wiilasha Unai Emery ayaa maamulka kubadda badi kala wareegay kooxda Barcelona ku dhawaad 90-kii daqiiqadood ee ay soctay tiiyoo Lionel Messi uu ku dhacay inuu dardar muujiyo iskaba daa inuu gool dhaliyee.
Wali kooxna kama soo kabsan guul-darro 4-0 Champion League ah ee wareegga bug-baxda, taasi oo la micno ah in wiilasha Luis Enrique ay jabiyaan rikoor cusub haddii ay heli karaan fursad ay ku hantaan Champion League.
Kooxda PSG ayaa u safri doonta Barcelona 8 March.
Previous: Verratti oo ku gacan-seyray hadal kasoo yeeray wakiilkiisa
Next: Rodriguez oo ku qanacsan joogitaanka Madrid.